How does the Myanmar legal framework support company-community relati…
How does the Myanmar legal framework support company-community relations?
Paul clark-sem-presentation-0909142... by Lisa Burchfield 229 views
Tourism Development in Kayah State:... by Ethical Sector 1784 views
Monitor LED AOC - e2070Swn (2) by AOC vision 189 views
Monitor i2757Fh / i2757Fm by AOC vision 249 views
Inier 2014 eng by inier_ppt 787 views
Bagan asaCultural Heritage Site: ... by Ethical Sector 1432 views
On 29 and 30 August PeaceNexus and MCRB convenedatwo day ‘collaborative design workshop’ at Inya Lake Hotel, Yangon to discuss the need for, and shape of,apossible initiative – or initiatives – to build capacity of civil society and business for dialogue and mediation of business-related conflicts.
MCRB presented on the existing Myanmar legal framework in support of company-community dialogue, and future opportunities including the potential for companies and communities to reach agreement on community development agreements/benefit sharing agreements which could coverarange of mutual interests and concerns.
Read more: http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/peacenexus-collaborative-design-workshop.html
naing san , Project Officerat International Alert. at International Alert
1. How does the Myanmar legal framework support company- community relations Vicky Bowman, Director Myanmar Centre for Responsible Business မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) Yangon 30 August 2016 www.myanmar-responsiblebusiness.org အမှတ် ၁၅၊ ရှမ်းရိပ်သာလမ်း (ဆာကူရာ ဆေးရုံအနီး) စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း / ဖက်(စ်) ၀၁ ၅၁၀၀၆၉
2. Professor John Ruggie, Special Representative to the United Nations Secretary General, 2005- 2011 • Policies မူဝါဒများ • Regulation စည်းမျဉ်းများ • Adjudication စီရင်ချက်ချခြင်း State duty to protect နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရန်တာဝန် • Act with due diligence to avoid infringement ထိခိုက်နစ်နာမှုများ၊ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ကြိုတင်စမ်းစစ်၊ ကာကွယ်တားစီးခြင်းများလုပ်ဆောင်ရန်လို • Address impacts သက်ရောက်ထိခိုက်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်မှု Corporate responsibility to respect စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ၏လေးစားလိုက်နာရန်တာဝန် • Effective access for victims ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူများအတွက် ထိရောက်သောကုစားမှုကို လက်လှမ်းမီမှု • Judicial and non-judicial တရားဥပဒေ၊ တရားရုံးနှင့်ဆိုင်သော နစ်နာချက်များ ကုစား မှု/ တရားရုံးများနှင့်မဆိုင်ဘဲပြင်ပ၌ နစ်နာချက်များ ကုစားမှု Access to remedy ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်း / ထိခိုက် နစ်နာမှုများကို ကုစားခြင်းများကိုလက်လှမ်းမှီမှု
3.  Consultation and disclosure in different phases Art 13: The Project Proponent shall: ◦ a) arrange for appropriate public consultation through all phases of the IEE and EIA process as required by Articles 34, 50, and 61, and ◦ b) disclose to the public inatimely manner all relevant Project- related information in accordance with this Procedure except that which may relate to National Security concerns as informed by the Ministry.  Challenges: ◦ New ◦ Poorly implemented – lack of government and company capacity; cost ◦ Not viewed by project proponents asacontinuing process of engagement and relationship building ◦ Tickbox
4.  Article5‘hta-nay tain-yin-tha [usual phrase for Indigenous People] should receive complete and precise information about extractive industry projects and other business activities in their areas before project implementation so that negotiations between the groups and the Government/companies can take place.’  “ဌာနေတိုင်းရင်းသား များသည် ယင်းတို့၏ ဒေသနယ်မြေအတွင်း သဘာဝ သယံဇာတများ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မစတင်မီ ပြီးပြည့်စုံပြီး တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ အစိုးရ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဒေသခံများအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိပါသည်။ ဤအချက်၏ အရေးပါပုံကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ Not yet tested…..
5. Chapter II objectives  (c) To promote people’s participation and collaboration particularly ethnic nationalities, women and smallholder farmers in decision making related to land and natural resource management;  (ဂ) မြေနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူများ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားတို့၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်။ Chapter III basic principle  (e) To promote inclusive public participation and consultation in decision making processes related to land use and land resource management;  မြေအသုံးချမှုနှင့် မြေအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူများပိုမို ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုရန်။
6. Part ( V ) Procedures related to Land Acquisition, Relocation, Compensation, Rehabilitation and Restitution မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း ၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်အစားထိုး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  38. When managing the relocation, compensation, rehabilitation and restitution related activities that result from land acquisition and allocation, unfair land confiscation or displacement due to the civil war, clear international best practices and human rights standards shall be applied, and participation by township, ward or village tract level stakeholders, civil society, representatives of ethnic nationalities and experts shall be ensured.  ၃၈။ ။မြေသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် မြေခွဲဝေနေရာချထားခြင်းတို့ကြောင့်လည်းကောင်း မြေကို မတရားသိမ်းဆည်းခံရခြင်းသို့မဟုတ် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ခံရ၍ မြေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း လျော်ကြေး ပေးခြငး၊ ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အစားထိုး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်ရှိအကျိုး သက်ဆိုင်သူများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းသည့် အကောင်းဆုံးနည်း လမ်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစံများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်
7. Gender: Women’s Participation ကျား/မ ။ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု Part (VIII) Land Use Rights of the Ethnic Nationalities အပိုင်း၈။ ။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ မြေအသုံးချမှု အခွင့်အရေးများ  67. Ethnic leaders, elders and women shall be involved in decision making processes related to land tenure rights of individual stakeholders or groups practicing traditional cultivation methods on customary lands, monitoring, and dispute resolution mechanisms.  ရှေးရိုးစဉ်လာမြေကို ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် စိုက်ပျိုးသေား တစ်သီးပုဂ္ဂလ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၏မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှု အပ်ါဆုံးဖြတသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များ ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်စေရမည်။ Part IX also provides equal rights of men and women in terms of land tenure and also in participating and representing the community regarding various land related issues. အပိုင်း (၉ )တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ မြေအသုံးချမှုကို တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး။ အမျိုးမျိုးသော မြေရာကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုပိုင်ခွင့်အစရှိသည့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန်လည်း ပါဝင်ပါသည်။
8.  Chapter II Formation of the Workplace Coordinating Committee  အပုိုင်း ၂ အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 3. In any trade in which more than 30 workers are employed, the employer, with the view to negotiating and concluding collective agreement, shall: (a) if there is any labour organization, form the Workplace Coordinating Committee with the view to makeacollective bargaining as follows: (i) two representatives of workers nominated by each of the labour organizations; (ii) an equivalent number of representatives of employer; ၃။ အလုပ်သမား၃၀ဦးနှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်ကို ဆွေးနွေးရရှိနိုင်ရန် အလုပ်ရှင်သည် - (က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းရှိလျှင် စုပေါင်းတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်နို်င်ရေးအတွက်အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့ရမည်။ (၁)အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းက အဆိုပြုသည့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးစီ (၂)အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဦးရေနှင့် အရေအတွက်တူညီသည့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ
9.  Chapter III Formation of the Conciliation Body  အခန်း ၃ အငြင်းပွားမှု ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း 10.The Region or State Government shall form the Conciliation Body in the townships within the Region or State as follows: (a)aperson assigned duty Chairperson by the relevant Region or State Government (b) three representatives elected by Member the employers or employer organizations (c) three representatives elected by Member workers or the labour organizations (d)adepartmental representative of Member the relevant township level (e) two distinguished persons trusted Member and accepted by employer and the labour organizations (f)aperson assigned duty by Secretary the Ministry ၁၀။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် အငြင်းပွားမှုညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး အဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့ စည်းရမည်။(က)ဥက္ကဌအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာတုိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကတာဝန်ပေးအပ်သူတစ်ဦး (ခ)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ အစည်းများက ရွေးချယ်ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး (ဂ) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများက ရွေးချယ်ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး (ဃ)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဆင့် အစုိုးရ ဌာနဆုိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး (င)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များက ယုံကြည်လက်ခံသည့် ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဥိး (စ)အတွင်းရေမှူး အဖြစ် ၀န်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးအပ်သူတစ်ဦး
10. The SEZ expects that companies doing business in the SEZ will 2. Engage with stakeholders: Companies should consult with all those affected by their activities, operations, and impacts, be they workers, consumers, or communities, as well as other stakeholders, so that companies have access to accurate and useful information about their actions and can createatwo-way dialogue. ……. 5. Ensure effective grievance mechanisms: Those affected adversely byacompany’s activities need access to effective remedies. This includes establishing grievance mechanism(s) that are accessible (including in the local language) to individuals, workers, consumers, and communities and the company’s participation in and cooperation with the grievance mechanism. Companies can refer to Guiding Principles 29 and 31 of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights for further information. Grievance mechanisms should be legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights--‐compatible, andasource of continuous learning. They should be designed in collaboration with potential users of the grievance mechanism. 6. Be transparent… 7. Create Shared Value…. 8. Support the communities in which they operate…..
11.  Reflecting both Myanmar needs and regional discussions led by PACT/Mekong partnership for the Environment (intended to develop Regional Guidelines  Ideally should incorporate IFC Performance Standard 1 on Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts whose objectives are: ◦ To identify and evaluate environmental and social risks and impacts of the project ◦ To adoptamitigation hierarchy to anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize, and, where residual impacts remain, compensate/offset for risks and impacts to workers, Affected Communities, and the environment. ◦ To promote improved environmental and social performance of clients through the effective use of management systems. ◦ To ensure that grievances from Affected Communities and external communications from other stakeholders are responded to and managed appropriately. ◦ To promote and provide means for adequate engagement with Affected Communities throughout the project cycle on issues that could potentially affect them and to ensure that relevant environmental and social information is disclosed and disseminated.
12. MCRB has recommended that MIC require all companies in receipt of an MIC Permit to:  a) Publish, within six months of the end of the company’s financial year, an annual sustainability report in Myanmar language, (and other languages where appropriate). This report should address how the company has invested responsibly in Myanmar. It should be published on the company website. The web link for the report should be notified to DICA.  b) Establish, within six months of receipt of the MIC Permit, an effective grievance mechanism designed in collaboration with affected stakeholders. This should be notified to DICA, and any relevant line ministry, together with the name and contact details of the responsible officer. This mechanism should be publicised on the company’s website as well as being accessible to those who the company may affect. A short report on the implementation of the grievance mechanism should be included in the annual sustainability report.
13.  Need full implementation of Thilawa Notification 4/2015  Is there scope foraform of ‘community development agreement (CDA)’/’benefits sharing agreement’ in all SEZs (Thilawa, Dawei, Kyaukphyu) or other major projects, settingaframework for project-community-government relations?  http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_ notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
14. MCRB has proposed:  similar provisions on grievance mechanisms for the draft regulations under the Mining Law (currently in preparation) ◦ See http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/consultation-rules-mining-law.html  That the regulations could include either encouragement orarequirement for mines to enter into Community Development Agreements
15. www.mcrb.org.mm myanmar.responsible.business
16. Please add our RSS feed to stay up-to-date on our activities http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/rss.xml www.mcrb.org.mm myanmar.responsible.business
Monitor LED AOC - e2070Swn (2)
Monitor i2757Fh / i2757Fm
Inier 2014 eng